SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Yekuedza Kit-SARS-CoV-2 Kwayedza Zvigadzirwa-Sinocare
SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Yekuedza Kit
(Colloidal Goridhe Nzira)
Iyo SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Bvunzo Kit ndeyeyeyeyehunhu kuonekwa kweSARS-CoV-2 IgM / IgG antibody muvanhu serum, plasma kana sampuro yeropa.
Iyo inoverengeka coronavirus ndeye yeiyo genus. COVID-19 chirwere chakanyanya kufema chinotapukira. Vanhu vanowanzo batwa. Parizvino, varwere vane hutachiona nekorona coronavirus ndiyo honzeri yekutapukira; asymptomatic vanhu vane hutachiona vanogona zvakare kuve hutachiona hutachiona. Kubva pane yazvino epidemiological kuferefeta, iyo incubation nguva ndeye 1 kusvika kumazuva gumi nemana, kazhinji mazuva matatu kusvika manomwe. Zviratidzo zvikuru zvinosanganisira fivhiri, kuneta uye kukosora kwakaoma. Kuzara kwemhino, kubuda mumhino, kurwadziwa pahuro, myalgia uye diarrhea kunowanikwa mune mashoma kesi.
l Kukurumidza kuona mukati memaminitsi gumi nemashanu
l Kuparadzanisa kwakaringana kwehutachiona hweIgM / IgG
l Nyore oparesheni pasina michina
l Visual mhedzisiro uye nyore kududzira
Kuongorora hutachiona (+)
Kuongorora hutachiona (-)
Murwere ari munguva yewindo yenoverengera coronavirus serological kuyedza, chaiwo ma antibodies mu immune system haasati agadzirwa.
Murwere angangove asina kumbobvira aine hutachiona hweCOPVID-19.
Murwere parizvino ari mumatanho ekutanga ehutachiona coronavirus hutachiona.
Iko kune mukana mukuru wekuti inoverengeka coronavirus hutachiona iri muchikamu chakakomba. Panguva ino, iko kwechokwadi kweiyo nucleic acid bvunzo mhedzisiro inoda kutariswa, uye zvinodikanwa kuti uone kana murwere aine mamwe marudzi ezvirwere. Yakanaka kana isina kusimba yakanaka kesi yeIgM mune varwere inokonzerwa nerheumatoid chinhu chawanikwa.
Varwere vanogona kunge vari pakati kana epamberi matanho eanovel coronavirus hutachiona kana hutachiona hunowanzoitika.
Varwere vanogona kunge vaine hutachiona hwekare asi vakatopora kana hutachiona hwabviswa mumuviri. Iyo IgG inogadzirwa neyekudzivirira immune inochengetwa kwenguva yakareba uye inogona kuwanikwa mune yeropa sampuro.
Murwere ari muchikamu chinoshanda chehutachiona hwehutachiona, asi muviri wemunhu wakagadzira hutachiona kuanoona coronavirus.
Murwere achangobva kutapukirwa neworona coronavirus, uye muviri parizvino uri muchikamu chekudzoreredza, asi hutachiona hwabviswa mumuviri uye antibody yeIgM haina kudzikisirwa kusvika pamugumo wekuonekwa; kana iyo nucleic acid bvunzo inogona kuve nemhedzisiro yakaipa mhedzisiro uye murwere ari muchikamu chehutachiona chinoshanda.